Sri Reddy kaliya ma ahan sido kale Radhika Apte, Varalaskhmi iyo kuwa kale oo ka hadleen gabdhaha sariirta lagu xujeyo marka film ay jilayaan!! – Filimside.net
Sri Reddy kaliya ma ahan sido kale Radhika Apte, Varalaskhmi iyo kuwa kale oo ka hadleen gabdhaha sariirta lagu xujeyo marka film ay jilayaan!!
April 9, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: April 9, 2018
Arinka naxdinta leh eeay sameysay Sri Reddy waa mid koonfur India oo dhan laga hadal haayo ayadoo la isla dhexmaraayo wararkaan sido kalena filmsameyaal iyo qarashgareyaal badana aya shaaca laga qaadi doona.
Sri Reddy waxay sameysay xili ay xafiiska shaqada filmada laga codsado kasoo baxday xili subaxnimo ah aye banaanka xafiiska isku qaawisay ayadoo saariga iska dhigtay rajabeetana isku reebtay.
Waxayna sheegtay inee cadeyneeso xafiiskan falalka xun ee kajiran iyo sida gabdhaha loo xujeyo hadii ay shaqo ka raadsadaan.
Hadaba Sri Reddy kahor atirishooyin badan ayaa arinkaan daaha ka qaaden, hallkaan hoose kaga bogo.
Shruti Hariharam: oo ka hadleysa arinkaan oo kale hada kahor waxay sheegtay in ay la kulantay qarash gareye kaaso u balan qaaday in uu filmkiisa la saxiixan doono balse waxuu ka codsaday in ay hal habeen la seexato.
Kadib markii dambe oo xiligii la gaaray ayuu hadana u sheegay in ay yihiin 4 qarash gareyaal oo usan kaligiis ahen hadii ay 4 tooda ay qanciso misane habeenkas la seexato markaas uu la saxiixan doono kadibna wey iska diiday gabadhaan xiligaasna 18 jir aye ahed sida ay sheegtay kadibna waxay ka niyad jabtay gabi ahaanba inee ka shaqeyso Kannada Industry.
Hadak karo waxay atirishadan sheegtay in atoore koonfur India ah uu ugu wacay qolkiisa qaaska ah ee Hotelka uu ka degena waxuun ka wacay telkeda gacanta balse wey afla gaadeysay sida ay sheegtay atoorahas ayadoo iska ceyrisay.
Mudo kadib markii ay damacday inee Bollywoodka soo gashay waxaa loo sheegay in ay sariirta la wadaagto shaqsi usahli doono soo galotiga Bollywoodka hadii ay sariir la wadaagtana atirisho weynn oo Bollywoodka laga danbeeyo inuu ka dhigaayo balse Radhika wey iska diiday ayadoo ninkaas yur iska tiri.
Lasoco qeybta labaad ee maqaalka iyo atirishooyinka ka hadleen shuruudaha lagu xiro kahor inta aysan Film jilista bilaawin…